Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaarigii loo adeegsaday qaraxii Zoobe – Kismaayo24 News Agency
by admin 19th October 2017 021
Weerarka oo loo adeegsaday gaari nooca loo yaqaan TM, ayaa waxaa la xaqiijiyay in laga soo buuxiyay kiimiko halis ah oo horay loogu haligay umado badan.
Mid kamid ah Saraakiisha reer galbeedka ee ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana baaray waxyaabaha loo adeegsaday Qaraxa ayaa sheegay in kiimikada loo adeegsaday Qaraxa ay kamid aheyd Nugleeyrka, waxa uuna tilmaamay in sidoo kale loo adeegsaday sun kale oo la dagaalanta nolosha.
Waxa uu tilmaamay in kiimikadaas lagu cabeeyay baco gaara oo loogu tallo galay, isla markaana leysku xiray iyadoo loo adeegsaday Qaraxa.
Waxa uu tilmaamay in baaritaan fog ay u baahan tahay kiiska Qaraxa, waxa uun Col. Teeri Yuwanga cadeeyay in Qaraxaasi uu ka halis badnaa Qaraxyadii horay uga dhacay Somalia.
Sidoo kale, waxa uu Col. Teeri Yuwanga carab dhabay in diyaarinta Qaraxaasi uu qaatay ugu yaraan laba asbuuc, maadaama uu yiri kiimikada ay halis badan tahay.
Madaxweyne Farmaajo ”qof walba oo soomaali ah waa in uu qoriga qaato ”hadal dheer
Dagaalkii Cuslaa Ee Ka Socday Magaalada Falluuja Ee Dalka Ciraaq Oo La Soo Afjaray